Imaatinka iTunes iyo Apple Music ee Windows Store waa la daahiyay | Waxaan ka socdaa mac
HomePod maahan waxa kaliya ee ubaahan doona waqti yar Apple Taasina waa in kasta oo xaqiiqda ah in horaantii sanadkan, Apple iyo Microsoft ay ku dhawaaqeen qorshayaashooda inay keenaan iTunes (sidaa darteed Apple Music) Windows Store ka hor dhamaadka sanadka, hadda waxay shaaciyeen inay u baahan yihiin waqti dheeri ah si ay tan u dhacdo.
Wixii aan ku noolahay, gudaha mindhicirka Apple muddooyinkii u dambeeyay, waxyaabo ayaa dhacaya oo sida caadiga ah aan dhicin taasna waxaa weheliya dhibaatooyin waaweyn oo soo wajahay nidaamyadooda cusub ee wax soo saarka, alaabada ay soo bandhigayaan ma iibinayaan illaa iyo goor dambe oo hadda xitaa codsiyada loogu talagalay barnaamijyada kale waxay ku jiraan xaalad isku mid ah.
Waa tan bayaanka Apple laftiisa:
Waxaan la shaqeyneynay Microsoft si aan ugu soo bandhigno waayo-aragnimada Lugood macaamiisheenna waxaanan u baahanahay waqti yar oo dheeri ah si aan ugu saxno
Khabiirka Microsoft, Mary Jo Foley ayaa xaqiijisay in aanu jirin qorshayaal lagu joojinayo soo saarista noocyadan iTunes, laakiin Apple waxay go’aansatay inay waqti badan ku qaadato inay ku gaarto dadka isticmaala Windows-ka si habboon.
Nooca cusub ee iTunes ayaa lagama maarmaan u ah dadka isticmaala Windows 10 inay marin u helaan arjiga, maaddaama nidaamkani kaliya ka shaqeynayo softiweer dhawaan laga beddelay Microsoft Store; noocyada caadiga ah ee nidaamka qalliinka waxay la shaqeeyaan iTunes for Windows. Marka Haddii aad leedahay nidaamka Windows 10 waa inaad sugto illaa Kirismaska ​​kadib ama xitaa wax kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » ITunes iyo Apple Music way ku daaheen Windows Store
Dadyohow Qarsoon, ciyaar cusub oo madadaalo u ah isticmaaleyaasha Mac